Vanuatu: Maxaa ka dhigay mid ka mid ah meelaha ugu farxadda badan dunida? - BBC News Somali
Dadka naftooda jecel waa "kuwo argagaxa balse farxad ku nool"
Farxad la'aantay ka cabanaysay fasaq la'aan baa loogu daray
Image caption Qaab dhismeedka jasiiradda Vanuatu
Cilmbaadhis taa la mid ah ayaa Iyana caddaysay, in doofaarka, khudaarta noocyadeeda kala duwan oo uu ka mid yahay Kava (Nooca caleenta cagaaran ah oo mararka qaar loo cuno si uu u yareeyo shakiga iyo welwelka) ay degaankaasi ka buuxaan iyagoo aan wax lacag ah ahayn.
Lahaanshaha sawirka UNICEF
Image caption Diyaarada is wada ee Drone-ta oo dadka degaankaas mar u keentay daawo.
Waxa kale ee dadka jasiiraddan deggan farxaddooda u sababta ah ayaa ah 'xidhiidhka qotada dheer ee ka dhaxeeya dhaqankooda, quruxda dabeecadda iyo deegaanka kala duwan ee ku xeeran'. Vanuatu, oo ah magaca dalkan waxa uu la micne yahay 'Dhulkayagii Dhabta ahaa'. Sidoo kale 139-ka luuqadood ee lagaga hadlo degaankan ayaa ka dhigaya inoo sidoo kale yahay, dalalka ugu luuqad yahansan dunida. Afafkan asliga ah ee ay ku hadlaan 92%, dadka u dhashay dalkani ayaa sidoo kale faham xooggan waxa ay la leeyihiin, xayawaanka, dhirta, daaqa, dhulka iyo guud ahaanba deegaanka iyo taariikhdiisa.
Inkasta oo uu hadda dalkani waajahayo caqabado waaweyn. Kuwaas oo lagu qeexo inay dab kor saran yihiin. Vanuatu, waxaa loo tixgeliyaa mid ka mid ah dalalka ugu fudud ee ay ka dhici karaan masiibooyin dabeeci ahi, iyadoo sannadihii la soo dhaafayna ay jasiiradahaas ku xoogganayaan dhul go' iyo isbeddelka cimillada ee dhanka badda. Taas oo ka dhigaysa in degaankaas loo aqoonsado halka ugu khatarta badan dunida, marka laga eego dhanka masiibooyinka sida laga soo xigtay sannadkii 2014-kii, Qaramada Midoobay.
Sanadkii 2015, Duufaantii Pam ayaa ku dhufatay jasiiraddan, iyada oo sababtay khasaare aad u weyn oo 75,000 oo qof ay hoy la'aanka dhigtay. Laakiin in kasta oo burburka intaa leegi dhacay, dadka deegaankan ayaa si dhakhso leh u bilaabay dib-u-dhiska tuulooyinka, iyaga oo muujinaya adkeysi iyo awooddooda waxqabsi inta ay leegtahay.